Buugga Ciyaaraha ee Qaadashada Isku Xidhka | Martech Zone
Isla markii dadka qaar ay ogaadeen in xiriiriyeyaasha bogagga dibaddu ay kor u qaadi karaan darajadaada Google, warshadaha SEO ayaa ku qarxay koritaanka. Waxay ahayd suuq bilyan doolar ah isla markaana Google ayaa si dhakhso leh u lumisay xakamaynta siinta dadka isticmaala natiijooyin wanaagsan. Waxay isku badashay tartan yaa bixiyay inta badan backlinks. Waad ku mahadsan tahay, kuwa u qalma suuqleyda, kuwan Qiyaanada SEO ayaa si weyn loo joojiyay. Isbeddelada algorithm ee Google ayaa furfuray xiriiriyayaal si liidata u dejiyey waxayna xitaa bilaabeen ciqaabidda shirkadaha ay ka helayaan xiriiriyeyaal aan dabiici ahayn.
Khadadka iskuxiraha ah ee loola jeedo ujeedada ah in la beddelo ama wax laga beddelo natiijooyinka raadinta waxay ku xadgudbayaan Tilmaamaha Webmaster-ka Google.
Ha rumaysanina cid kasta oo dhahda waad iibsan kartaa waxyaabaha ku jira leh xiriiriyeyaal iyo in si uun uusan u jabinayn shuruudaha. Haddii ujeeddada ka kooban waxyaabaha la iibsaday ay ahayd in la dhigo isku xidhkaas, weli waad ku xadgudbaysaa Shuruudaha Adeegga Google!
Sawir gacmeedkan, Taabashada Taatikada - Buugga Xiriirka Qaadashada Playbook, waa infographic weyn oo qeexaya caqabadaha, tilmaamaha, iyo fursadaha lagu dhisayo xiriiryo dabiici ah. Jawaabtu, dabcan, runtii waa in la iloobo xiriiriyeyaasha gabi ahaanba oo kaliya diirada la saaro dadaalkaaga horumarinta waxyaabaha cajiibka ah.
Mawduuc weyn ayaa la wadaagayaa. Wadaagista waxaa lagu sameeyaa shabakadaha ku habboon. Wadaagida khuseysa ayaa wada xiriirinta isku xirnaanta. Darajooyinka xiriiriyaha ku habboon ayaa darajada wada.
Tags: isku xirka dhismahahelitaanka isku xidhkaisku xirka dhismahadarajo dabiici ahraadinta dabiiciga ahSuuq GoobidSEO
5 Talaabo oo lagu Kordhiyo taraafikada isla markaana loogu beddelayo Macaamiil Macaamiil
Nov 8, 2012 at 10: 57 AM
Adeegsiga weyn ee eraybixinta kubbadda cagta si aad fikraddaada uga gudbiso wax ku saabsan dhaqanka wanaagsan ee dhismaha xiriir xun iyo qaab gaar ah Ma ahan taageere Peyton Manning (oo ka yimid New England) laakiin waan ku qanacsanahay! Waxaan si gaar ah u jeclahay qodobka ku saabsan "kubbadda ku baahinta". Si aad runtii u horumariso muuqaalkaaga oo aad si dabiici ah u kasbato xiriiriyeyaal, waxaad u baahan tahay inaad ku soo bandhigto waxyaabaha ku jira guryaha websaydhka ah ee aanad adigu lahayn.
Mawduuc weyn oo ku saabsan dhismaha isku xidhka. Xaqiiqdii waan shaqeyn doonaa habkan.